Raketo an-tsarimihetsika amin'ny Screen Recorder ny efijery Mac anao, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Avy amin'ny mac aho
Rehefa mirakitra ny efijery an'ny Mac antsika dia manana fitaovana samihafa izahay, fitaovana manolotra asa bebe kokoa na latsaka. Raha ny tena izy dia manana QuickTime, fampiharana macOS teratany izahay, eo am-pelatananay, fampiharana iray izay afaka manoratra mivantana ny efijery an'ny Mac isika nefa tsy mila mampiasa rindranasa fahatelo.
fa, Raha tsy tiantsika ny fomba fiasan'izy io dia afaka mampiasa rindranasa avy amin'ny antoko fahatelo isika. Iray amin'ireo fampiharana ireo ny Screen Recorder. Screen Recorder dia manolotra antsika andian-dahatsoratra fanampiny izay tsy hitantsika izany amin'ny QuickTime, toetra izay tsipihinay etsy ambany.
Screen Recorder Endri-javatra lehibe
Alao ny biraonao amin'ny efijery feno na amin'ny faritra voafantina ao amin'ny birao.
Raketo an-tsary ny zava-drehetra amin'ny efijery misy ny vahaolana mitovy amin'ilay asehon'ny mpanara-maso anay.
Alao ny fivezivezena ny cursor ary soraty ny tsindry rehetra ataontsika amin'ny totozy eo amin'ny efijery.
Izy io koa dia ahafahanao mirakitra ny raki-peo momba ny rindranasa na ny feonay manokana rehefa manao ny fandraisam-peo izahay, mety indrindra amin'ny resaka fampianarana.
Manome preset output isan-karazany ho an'ny endrika malaza rehetra ho an'ny finday avo lenta, takelaka ary fitaovana elektronika ankapobeny.
Io dia ahafahantsika mirakitra ireo antso an-tsarimihetsika ataontsika amin'ny alàlan'ny FaceTime na amin'ny Skype.
Hitsin-dàlana sy fiasa mora ampiasaina hafa hisamborana ny efijeryo eo noho eo.
Fandraisana mpampiasa feno tanteraka, na dia indraindray aza, indrindra amin'ny voalohany, dia mety ho somary sarotra.
Ny Screen Recorder dia manana vidiny mahazatra 9,99 euro, saingy mandritra ny fotoana voafetra, hoy ny mpamorona mandritra ny 2 andro, ho azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny alàlan'ny rohy avelako amin'ny faran'ity lahatsoratra ity. Ny fotoana farany nohavaozina ny fampiharana dia tamin'ny fiandohan'ny taona, noho izany dia mifanaraka 100% amin'ny macOS High Sierra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Raketo an-tsoratra ny efijery Mac anao amin'ny Screen Recorder, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Lukas Justicia Navas dia hoy izy:
Tsy azoko na inona na inona !! Tsy ilaina, fampiharana ivelany, os x efa tonga fenitra, QuickTime ... Na izany aza ...
Valiny tamin'i Lukas Justicia Navas
Azavaina tsara, raha tsy azonao izany dia tsy olako.
MAQuInQui dia hoy izy:
XD ny setroka Ignacio ... hitako ho scam ihany koa io .., ary novakiako sy azoko tsara
Valio amin'i MAQuInQui
Mampahafantatra anao aho rehefa mampita izany amiko ny developer. Raha mandroso ny daty ianao ary manidy ny fampiroboroboana aloha, tsy afaka manao na inona na inona aho. Ankoatr'izay, tsy scam izany, rehefa maimaim-poana dia hita ao amin'ny plugin na amin'ny Mac App Store. Rehefa karamaina dia mitovy.
Vao iray andro lasa izay izay namoahanao azy fa tsy miseho maimaim-poana ao amin'ny magazay app. Tsy vao sambany no misy izany, doka maimaimpoana ho an'ny fampiharana ary avy eo hosoka ny hira. Ny atao maimaimpoana dia ny dokambarotra ataon'ny olona toa anao. Raha ny fanazavana, € 10,99 ny vidiny. Raha tsy izy ireo no mamitaka anao na tsy miraharaha izay soratanao.
Valiny tamin'i José Ramón